I-Solar Fusion: Itekhnoloji yoguqulo lweHuawei kumandla elanga | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
Amandla elanga axutywe neteknoloji yotshintsho ukuze afumane okuninzi kuwo. Kule meko, siza kuthetha ngayo ISolar Fusion. Sisizukulwana esilandelayo esihlakaniphileyo se-photovoltaic isisombululo esenziwe nguHuawei. Le ngcamango yoguquko igxininisa iteknoloji ehlakaniphile kunye nentsha ukwenzela ukubonelela ngeyona migangatho ilula yokufakela kunye nokhuseleko oluphezulu kunye nokusebenza kwexesha elide. Eyona njongo iphambili yeSolar Fusion kukuba ikhaya linokuba ne-100% yokuzithengela.
Kweli nqaku siza kukuxelela yonke into okufuneka uyazi malunga neSolar Fusion, iimpawu zayo kunye neenjongo eziphambili.
1 Yintoni iSolar Fusion
2 Yenziwe ngantoni inkqubo yeSolar Fusion?
4 Izinto eziluncedo zamandla elanga
Yintoni iSolar Fusion
UHuawei uphehlelele kwisizukulwana esilandelayo isisombululo se-smart photovoltaic "FusionSolar", egxininisa itekhnoloji yobuchule obutsha, ukubonelela ngeyona migangatho ilula yokufakela, ukhuseleko oluphezulu kunye nokusebenza kwexesha elide, kunye injongo yi-100% yokusetyenziswa kwasekhaya. Iinkqubo zePV zophahla lwezindlu kufuneka zihlangabezane nemfuno ekhulayo yokusetyenziswa kwayo. Ngesi sizathu, iinkqubo ezingcono zokugcina amandla ziyafuneka.
Inkqubo eyenzelwe abanini bezindlu abaqeqeshiweyo nabafakeli. Abafakeli beendawo zokuhlala kufuneka banike abanini bezindlu ngenkqubo yokuzimela enamandla kunye nekamva elizayo eligcina ukusebenza kakuhle, ukuguquguquka kunye nofakelo olukhawulezayo, kunye nokubonelela ngezisombululo ezihlakaniphile ezihlangabezana neemfuno zomsebenzisi kunye nenkonzo yabathengi, ezifana nokuxilongwa okude kokungaphumeleli, ukufezekisa ngakumbi. Ukugcinwa kakuhle kunye nokuncinci.
IHuawei idibanisa itekhnoloji yamva nje yedijithali kunye ne-intanethi kunye netekhnoloji yokuhlala yelanga. Le teknoloji ibonelela ngokulungelelaniswa kokuveliswa kwamandla e-photovoltaic, Iplagi edibeneyo ye-plug-and-play interface yebhetri kunye nolawulo lwamandla asekhaya ahlakaniphile.
Kwinkqubo entsha yokuhlala yokuhlala, amandla e-photovoltaic eveliswa ngamapaneli elanga adibana nemfuno yombane wekhaya emini, kwaye amandla asele avelisiweyo asetyenziselwa ukuhlawula ibhetri kwaye emva koko akhutshwe ukuhlangabezana nemfuno enkulu yombane. Imfuno yombane ebusuku okanye emini. Ngale ndlela, iinkqubo zokuhlala ze-photovoltaic zinokufikelela kwinqanaba eliphezulu lokuzithengisa kunye nokwandisa ukusetyenziswa kwamaphahla ukuze ufumane amandla amaninzi.
Yenziwe ngantoni inkqubo yeSolar Fusion?
Inkqubo inala malungu alandelayo:
Iziko lamandla elihlakaniphile: I-inverter ephezulu esebenzayo, kunye nokusebenza kakuhle kwe-98,6%. I-interface yokugcina amandla edibeneyo ingasetyenziswa ngokukhawuleza.
I-Smart photovoltaic optimizer yebhetri: Ukusebenza kwe-99,5%. Shiya iiphaneli ezininzi kwisilingi nganye ukwenzela ukusebenza kwenkqubo ephezulu. Faka i-rack ngokukhawuleza kwi-warehouse kwaye ixesha lokufakela kwisilingi liya kuba lifutshane. Ukubeka iliso kude.
Inkqubo yolawulo: ukufikelela ngokulula kwidatha kwizixhobo eziphathwayo. Iingxelo ezisebenzayo zeziganeko kunye nee-alam. Ulawulo oluphakathi kwi-photovoltaic cell system.
Ukhuseleko lweeseli ze-photovoltaic ezihlakaniphile: Nxibelelana ne-optimizer nge-MBUS. Ixhasa ukubekwa kweliso kwexesha lokwenyani kunye neemodyuli zolawulo.
Ibhetri ye-LUNA2000 yokuhlala yeyona nto iphambili kwisisombululo sikaHuawei ngeli xesha. Ibhetri isebenzisa iibhetri ze-lithium iron phosphate ukwandisa ukhuseleko. Yamkela uyilo lwemodyuli kwaye ixhasa ukwandiswa kwamandla okuguquguqukayo (5-30 kWh). Ipakethi nganye yebhetri inesincedisi esakhelwe ngaphakathi ukuxhasa intlawulo ezimeleyo kunye nolawulo lokukhutshwa.
Inkqubo yeSolar ye-Fusion inikeza i-photovoltaic ene-optional power optimizer enokunciphisa iingxaki zomthunzi wendawo yokuhlala kwaye ivumele ukusetyenziswa kweenkqubo ze-photovoltaic ukuhambisa ngokufanelekileyo uphahla oluxubekileyo oluxubeneyo.
Ngokutsho kwenkampani, i-optimizer eyenzelwe nguHuawei inokwandisa amandla okusebenza kweemodyuli ze-photovoltaic ukuya kuthi ga kwi-30% kungakhathaliseki ukuba ngumthunzi kunye nesikhokelo sokusebenza okuphantsi.
I-Artificial Intelligence Driven Arc Fault Circuit Breaker (AFCI) inciphisa umngcipheko womlilo ngokuvala itekhnoloji yokuvala ngokukhawuleza, ifezekisa i-voltage yesilingi engu-zero kunye nomngcipheko we-arc we-zero, kwaye ifezekisa ukhuseleko oluphindwe kabini.
Ukusetyenziswa kwenkqubo kukuphahla kwendawo yokuhlala. Inkqubo yokulawula i-PV ehlakaniphile inika ukuhamba kwamandla ngexesha langempela kunye nokufundwa kokulinganisela kwamandla, kunye nokulawulwa kokusebenza kweepaneli zePV.
Iinketho zoqwalaselo lwemowudi yolawulo zibandakanya ukuzisebenzisela okuphezulu, okuphambili ngaphezulu kwemveliso yegridi, ukugcinwa kwePV ephambili, okuphambili ngaphezu kokutofa kwamandla angaphezulu kwePV kwigridi. Inkqubo ingaqwalaselwa ukuze abathengi basebenzisa amandla amaninzi ngokuzenzekelayo xa ixabiso liphantsi kwaye ugcine ngokuzenzekelayo xa ixabiso liphezulu.
Makhe sibone ukuba zeziphi iingenelo zokusebenzisa olu hlobo lwamandla:
Ngamandla acocekileyo ngokupheleleyo anceda ukunciphisa i-carbon footprint kakhulu. Siyabulela ekusebenziseni kwayo siyakuphepha ukuveliswa kweegesi zegreenhouse kwaye asingcolisi ngexesha lesizukulwana sazo okanye ngexesha lokusetyenziswa kwazo. Kukho ungcoliseko oluncinci kuphela xa kusenziwa iipaneli zelanga.
Ngumthombo wamandla ohlaziyekayo nozinzileyo ngokuhamba kwexesha.
Ngokungafaniyo namanye amandla ahlaziyekayo, la mandla anokuzifudumeza izinto.
Ayifuni naluphi na uhlobo lokutsalwa rhoqo kwezinto ukuze isebenze. Oku kwenza amandla angabizi kakhulu otyalo-mali lwabo lokuqala kulula ukulufumana kwakhona ekuhambeni kweminyaka. Kuyinyani ukuba enye yeengxaki eziphambili amandla avuselelekayo ayenayo ukususela ekuqaleni yayiyi-investment yokuqala kunye nesantya sokubuya kwayo, nangona oku akusekho ngenxa yokuphuhliswa kobuchwepheshe. Iphaneli yelanga inokuba luncedo ngokugqibeleleyo iminyaka engama-40.
Ukukhanya kwelanga kuninzi kakhulu kwaye kuyafumaneka ngoko ke ukusetyenziswa kweepaneli zelanga yinto enokwenzeka. Phantse nayiphi na indawo kwiplanethi inokusebenzisa amandla elanga. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba enye yeenzuzo ezinkulu zamandla elanga kukuba ayifuni i-wiring. Oku kunceda ukufakwa kwiindawo apho kunzima ukufaka i-wiring enjalo.
Enye inzuzo yamandla elanga kukuba inciphisa imfuneko yokusebenzisa amafutha efosili, ngaloo ndlela inceda ukulondoloza ubuncwane bendalo nokunciphisa ukungcoliseka kwendalo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga neSolar Fusion kunye neempawu zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » ISolar Fusion